Proclaiming the Word - Fa nahoana isika no mila mamita iraka amin’ny ankizy? | Outlines of Messages
4. tena misokatra amin’ny Filazantsara ny ankizy. Araka ny fanadihadiana nataon’ny Barna Research ny tombatomban’ny fanekena an’I Kristy dia betsaka kokoa noho ny an’ny tanora sy ny olon-dehibe. Eo amin’ny ankizy5 ka hatraminn’y 13 taona ny tombatomban’ny fanekena an’I Kristy dia 32%. Mihena ho 4% izany rehefa tonga 14-18 taona, ary miakatra kely ho 6% izany amin’ireo fahanterana.
5. Manana afotoana lava tokoa ny ankizy manoloana ny hoaviny. Ny iraka amin’ny ankizy dia tena fanomezan-tànana ho azy mikasika ny hoaviny. Ny isa ankapoben’izao tontolo izao dia eo amin’ny 6.000.000.000. farafahakeliny dia iray ampahatelony dia ankizy avokoa, ary izy ireo no ho avin’ny firenena sy ny fiangonana. Ny ankizy voavonjy iray dia fiainana voavonjy.
6. Ny ankizy koa anefa dia fitaovana mahomby eo am-pelan-tanana’Andriamanitra hamonjy ny hafa. Ny fianakaviana, ao anatin’izany ny ray aman-dreny sy ny ireo ray be sy reny be dia afaka ny ho voavonjy amin’ny alalan’ny fijoroana vavolombelona tsotra ataon’ny ankizy vavonjy iray. Eny fan a dia ireo namany azy dia afaka ny voavonjy ho an’I Kristy koa. Noho izany dia ny ankizy dia tena fitahiana ho an’ny fiangonana an-toerana tokoa.
7. Ny ankizy dia tena mitana andraikitra lehibe eo amin’ny tantaran’ny Fiangonana Kristiana. Hoy I Martin Luther “ Raha ny Fanjakan’Andriamanitra dia ho avy amin’-kery dia mila manomboka amin’ny ankizy isika ary mila mampianatra azy ireo isika hatrany amin’ny fitrotroana” I charles spurgeon dia nanoratra hoe: “Mila ny Filazantsara ny ankizy, ny Filazantsara manontolo, ny Filazantsara ho an’ny ankizy, tokony manana an’io izy ireo, ary rehefa ampianarian’ny Fanahy Masiny izy ireo dia afaka mandray azy io tahaka ny olona efa masaka ela”. Dean Stone, filohan’ny INCM taloha dia nanamarika fa ny asa fanompoana amin’ny ankizy no tena tetikady mahomby amin’ ny Fitoriana Filazantsara eo amin’ny Fiangonana… ny tsara indrindra amin’ny asa fanompoana eo amin’ny fiangonana an-toerana dia manomboka amin’ny fahazazana ary mitohy amin’izany.”
8. Ny ankizy dia mila ireo izay manana fanomezam-pahasoavana avy amin’ny Fanahy Masina. Ireo olona ireo dia afaka mampianatra sy mitory amin’izy ireo. Izy ireo dia nantsoin’Andiramanitra mba hanolotena amin’ny iraka amin’ny ankizy (Rom 1, 16).
9. Manome voninahitra an’Andriamanitra isika amin’ny fanolorantena amin’ny iraka amin’ny ankizy. Ny tena faniriana lehibe amin’ny kristiana, dia tsy ny ho ray amandreny na mpampianatra fotsiny no manome voninahitra an’Andriamanitra. Rehefa voavonjy ny ankizy ary rehefa mitombo sy miaina ao amin’I Kristy izy ireo dia manome voninahitra ho Azy! Io no vokatra izay tadiavin’ny Tompontsika! Ny iraka amin’ny ankizy dia tena ilaina hanomezam-boninahitra ny Tompo!